SIDA LOO JAJABIYO SOCODSIIYAHA ROOGA: SIFOOYINKA MUUQAALKA IYO XEERARKA ISTICMAALKA QALABKA (FIIDIYOWGA) - CIID
Mishiinka ama gawaarida yaryar waxa uu noqon karaa kaaliye aan loo baahnayn in beeralay kasta oo yaryar ah dhulkiisa. Uma baahnid in badan oo shidaal ah, waxay qaadataa meel aad u yar, waa sahlan tahay in la shaqeeyo, laguna xalliyo dhowr hawlood oo muhiim ah, mid ka mid ah oo dhulka ku beera.
Mini, dhexdhexaad ah ama culus?
Si loo beerto rinjiga (tiller) inuu noqdo mid waxtar leh, waa lagama maarmaan in la doorto qalabka saxda ah. Markaad dooratid qalab, waa in aad tixgelisaa, marka hore, aagga dhulalka la shaqeyn doono gargaarkiisa, iyo marka labaad, hawlaha ay tahay in ay fuliyaan.
Waxaa jira saddex nooc oo kala duwan:
Waxaan kugula talineynaa in aad barato astaamaha farsamada ee Neva MB 2, Salyut 100, Motoblocks Zubr JR-Q12E.
Tixgeli faa'idooyinka ugu muhiimsan iyo khasaarihiisa mid kasta oo ka mid ah.
Mini, ama iftiin fudud
Waxaa loo isticmaalaa in laga shaqeeyo goobo yaryar oo dhul ah, waxaa sidoo kale loo yaqaannaa mishiinka-kiciyaasha. Qalabka korontada ee qalabkan - illaa 4.5 koron.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka carbuunayaasha makiinada:
iftiin (miisaanku kama badna 40 kg);
qiimaha hoose (laga bilaabo 6000 UAH.);
awoodda ay u leedahay in ay adkaato si aad u gaarto meelaha sababtoo ah qabashada yar ee cutter.
Si kastaba ha noqotee, iftiin yar ayaa shaqeeya wakhti gaaban, maaddaama ay leeyihiin makiinad awood leh oo degdeg ah oo si deg-deg ah u dhaafaysa oo aan si fiican dhulka loogu aasin miisaan culus.
Waa muhiim! In kalluumeysiga ku xiran qalab dheeraad ah, oo ay ku jiraan xaaqin, lama siin.
Marka loo eego sambabada, waxay ku faanaan joogitaanka wadida muraayada gawaarida oo aad u fiican oo ku shaqeynaya meelaha ballaaran (illaa 0.5 hektar). Miisaanka waa kala duwan yahay 45 ilaa 65 kg, kharashka qalabkan, celcelis ahaan, waa 10 000-12 000 UAH. Awoodda tamarta - 4.5-12 litir. c. Moodalooyin badan oo ah matooro dhexdhexaad ah waxaad ku dari kartaa qalab dheeraad ah.
iftiinka hore iyo laba duurjoog;
awooda lagu xiro xaansho;
marka la barbardhigo qalabka culus ee noocan ah, dhexdhexaadinta dhexdhexaadku waa mobile, waa sahlan tahay in la rogo.
Waxaa ka mid ah dhibcaha daciifka ah ee monoblocks ee fasalkan, waxay u qoondeeyaan qoto dheer oo ah ilaa 11 cm, taas oo aan ku filneyn dhaqamada badan.
Waxay ku habboon yihiin beerashada xirfad leh ee dhulka meelaha ay ka kooban tahay in ka badan 0.5 hektar, maadaama ay haystaan ​​tamar laga bilaabo 12 ilaa 30 litir. c. iyo waxyaabo badan oo dhammeystiran oo dhammeystiran. Kharashka mashiinka culus ee culus maaha wax ka yar 12 000 UAH. Suurtagalnimada in la barbardhigo digriiga baradho, trailer ama xaaqin waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn Awoodda korontada ee noocan ah. Waxay si fudud u kala jajabaan ciidda waxayna ka celinayaan goobta marar badan oo ka dhaqso badan mootooyinka wax lagu beero.
Dhibbaneyaasha culus waxay leeyihiin fursado dheeraad ah: awoodda lagu xakamayn karo mootada pneumatic iyo dirista (sare-hoose), gadaal. Qalabka la ogaan karo - waa mid adag, sidaa darteed dadaal badan ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo si loo soo celiyo qalabka; baahida loo qabo xoojinta, maaddaama culeyska sarreeya ee jajabiyaha ama jilbaha gacanta lagu xiro ay jebin karaan.
Baro sida loo qalabixiyo matoorkaada adoo barbar socda, baradho baradho, digriiga baradho.
Ka dib markii ay go'aamiyeen in noocyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa culus ee qalabkani ay ku haboon yihiin in dhulka dhulka la dhigo iyadoo loo marayo cagaf-raacan dambe iyadoo la adeegsanayo dhagax la fuushay, aan ka fekerno sida loo diyaariyo socodka gadaashiisa gadaashiisa.
Ku rakibida furaha ciidda
Ugu horreyn, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibtid qabsiyada dhulka leh dhexdhexaad ah oo aan ka yarayn 50 cm, iyo ballaciisu yahay 18 cm Ka hor inta aadan diyaarin qalabka gawaarida, qalabka ku darso dusha meesha ay si toos ah u taagan tahay. Kadibna, wadooyinka dhejiska ah halkii laga geli lahaa taayirrada leh taayirada, ku rakib tuugooyinka godadka dhulka. Ka dib markaad xirto qabatooyinka, waxaad sii wadi kartaa inaad xirtid dhajinta xayiraadda socodka.
Ma taqaanaa? Ugu horreyntii, beeralaydu waxay dhulka ku qabsadeen gacmahooda, ka dibna ulaha, iyo kaliya rubuc qarnigii 4aad ee qashinka loo adeegsaday, ilaa bartamihii qarnigii ugu dambeeyay adduunka oo dhan waxay calaamad u noqotay bilawga nolol cusub waxayna ahayd astaanta beeraha.
Isku xirka iyo hagaajinta
Dhuuradaha waxaa lagu dhajiyaa socodka. xirxirayaasha, noocyada kala duwan ee kuwaas oo leh hantidooda. Sidaa daraadeed, ka hor inta aanad ku rakibin mashiinka fayadhawrka, waxaa lagama maarmaan ah in la qabsado shaqada ku xirnaanta qashinka. Waa in lagu dhejiyaa hal pin, iyadoo la ilaalinayo dib u qaabeynta dusha diyaarada (5-6 °). Isku-darka isku-dhafka oo leh laba xarriijin ama ka saarista ciyaarta, waxaad heli kartaa xiriir adag, taas oo qalad ah.
Waa muhiim! Haddii xayiraadda aysan laheyn wax ciyaar ah, marka marka xayndaabku soo baxo horay u socdo iyo xoog xooggan oo ka yimaada dhulka, waxay ku dhaqmaan ma aha oo kaliya xayndaabka isku xirnaanta, laakiin fayadhawrka oo dhan ayaa loo rogayaa dhinaca, taas oo si weyn u adkaynaysa shaqada.
Marka aad u baahato ku darso jilbahaiyada oo aanad adkeynin nudaha dhoobada oo dhan si aad u bilowdo hagaajiyaha daaqa. Hawlgalkan waxaa si fiican loo qabtaa kaaliyaha. Marka lifaaqa lagu lifaaqo, waxaad sii wadi kartaa inaad ku hagaajiso xayndaab ku xiran barxada. Hagaajinta duufaanku way ka adag tahay marka la isku daro wadar ahaan, laakiin habkani waa mid aad u muhiim ah, sababtoo ah haddii aad si qalad ah u hagaajinayso xayndaabka, waxaad u baahan doontaa inaad dadaal dheeri ah gasho oo aad uqalantid tayada sare. Si aad u hagaajisid budada dubista on motoblock, iyadoo gacan ka geysata istaagida waa lagama maarmaan isu dheellitiridda qalabka beeraha ee dunta. Si arrintan loo sameeyo, muraayadaha dhuxusha oo isku mid ah, dhererkoodu wuxuu ku xiran yahay qoto dheer oo la rabo in dhulka dhulka lagu qodo, waxaan ku ridnaa qabsiyada dhulka iyo taageerada lugta ee motoblock. Tani waa in la sameeyaa si uusan socodka uusan uga miisaanneyn lifaaqyada.
Talaabada xigta waa in la hagaajiyo bolka, tilmaan sariirta xayawaanka sida habka cirifkiisa u siman yahay dhulka. Taas ka dib, waa lagama maarmaan in laga saaro dhammaan taageerooyinka oo ay hagaajiyaan gudbiyaha si ay gacmahoodu u yihiin heer isku mid ah oo suunka shaqaaluhu u qodaya ciidda. Sidaa daraadeed, gacmooyinku ma daalaan wakhti dheer markaad la shaqeyneyso cutubka.
Marxaladda ugu dambeysa - xoqidda xasilinta heer-hawleedka. Xaglaha u dhexeeya dhamaadka fiiqan ee xaaqidda iyo dusha dhulka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo la marin karo xirmooyinka ciriiriga ah ama adoo isticmaalaya iskudhis hagaajiya. Qaab labaad ayaa ah mid sahlan oo waxtar leh. Si arrintan loo sameeyo, marka loo eego mishiinka, oo ku dul taagan diyaarad la socota qaadhaan ku xiran, waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo qalabka wax lagu toosiyo si ay uhesho wareejinta "dhulka". Ka dib - furfurida furaha jihada ka soo horjeeda, sidaa daraadeed "dhabarka" ee xayiraadda wuxuu kacay 2.5 ilbiriqsi. dhulka kor ku xusan, mar dambe iyo wax ka yar. Haddii arrintan loo yaqaan "angle of attack" waa mid aad u ballaadhan ama liddi ku ah, socodka gadaashiisa ka dambeeya lama dhaqaajin doono sida ay tahay.
Waa muhiim! Laga soo bilaabo xulashada of dunta waxay ku xiran tahay haddii ay suurtagal tahay in la xaaqo ciidda. Marka la iibsanayo lifaaqyada, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xaqiiqda ah in cabirkiisu uu ku xiran yahay culeyska motoblock (wadar ahaan miisaankoodu yahay 100 kg, roodaanku waa ku habboon yahay, xajmiga waa 23 cm, iyo xargaha kabaha mashiinka culeyskiisu ka sareeyo 75 kg waa inuu ahaadaa 18 cm)
Way sahlan tahay in la ogaado sida loola socdo socodsiiyaha xajiyaha. Si aad tan u sameyso, u samee qalabka si aad u qaadatid meesha dhulka lagu duuduubay iyo safka kowaad ee meesha dabacsanaantu dhacayso, jiid xadhigga aad adigu isbarbar dhigi karto - digaagu wuxuu u jajabiyaa dhinaca midigta, iyo safka ugu horeeya ee aan lahayn qalabka gargaarka.
Qalabka qalabka waa in loo rogaa bidixda si uu ugu socdo dhulka daaqa. Ka hor inta aan la bilaabin qulqulka waaweyn, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo xakamaynta xakamaynta ciidda - marin ujeeda dhinaca dambe ee qaybta xawaare hooseeya.
Tani waa lagama maarmaan si loo hubiyo in faylka si habboon loo hagaajiyo iyo haddii qoto-dheeraadka uu ku filan yahay (waa inay ahaataa 15-20 cm). Waxaan ku dhejin karnaa lugta saxda ah ee feerka la qalajiyey, u leexo qalabka ugu horeeya, qalabka ku dhaqso dhinaca midigta una bilow dhaqaaq. Markaan sameynay marxaladdii ugu horeysay ee xukunka, waxaan u jeedineynaa qalabka ilaa 180 ° sidaa daraadeed gawaarida saxda ah ee gawaarida ayaa ku jira jihada ka soo horjeedda safka horay loo xaaqay, oo u dhaqaaq dhinaca jihada kale. Kadib markii loo gudbo mar labaad, waxaan qiyaasi karnaa qoto dheer ee furrow. Haddii qotoqoshadu aanay ku filneyn ama furrow uu aad u qoto dheer yahay, dharku waa inuu mar kale dib-u-hagaajiyaa.
Dhulka dhulka, waa lagama maarmaan in la hubiyo gambaleel xaq ah ma uusan dhaafin furrow oo kii fuushanaana wuxuu u ekaa dhererka dhulka. Cillad kasta oo furrow ku xiga waa inaysan ka fogeyn mid hore (masaafada u dhexeysa fuudhka ilaa 10 cm).
Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in furrow uusan ku dhicin furrow hore by dhiiqada dhulka. Si taas loo sameeyo, muraayadda saxda ah waa inay dhexdhexaadiso. Haddii aad ogaatid sida loo xoqdo dhaan qabatada mashiinka, si sax ah u hagaajin, qalabku waa inuu si habboon u dhaqdhaqaaqaa, iyada oo aan lahayn jajab iyo xakameyn dhinaca dhinac ah. Waqti ka dib, marka aad hubiso in jeexjeexyada ay xitaa, xawaaruhu waa la kordhin karaa si ay dhulka dushiisa u siman tahay xitaa xajistiisa lafteedu si degdeg ah u socoto.
Dhulida dhulka ku dhejisid xargaha socodka gadaashiisa waa in si tartiib ah loo sameeyaa, ma riixi kartid qalabka. Haddii ay dhacdo in aad u kululaato mishiinka, oo inta badan dhaca, waa in la joojiyo mudo ah.
Ma taqaanaa? Lakabka bacriminta (humus) lama soo celin karo. Iyada oo ay sabab u tahay beerashada, heerka oksijiinta ee lakabyada qoto dheer ee ciidda kor u kacda, taas oo keenaysa humus in macdanta laga qodo. Tani waa sababta keentay in sanadaha hore caleemaha la beero waxay dhalinayaan wax soo saar weyn. Si kastaba ha ahaatee, waa geedi socodka macdanta dhalidda ee lakabka bani-aadmiga u horseedaya hoos u dhaca tirada, taasoo saameyn xun ku yeelan karta bani-aadminimada.
Sidaa darteed, waxaan ogaanay in ay ka fiican tahay isticmaalka dhexdhexaad ah iyo culus si ay u laalaadaan qoryaha oo dhulka ku duugaan. Xayawaanku wuxuu ku xiran yahay minitraktor iyada oo la adeegsanaayo lamabarrada, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la isku hagaajiyo (qoto dheer, xajmiga, heerka dunta dhulka). Isbedelka saxda ah waa fure u ah hirgelinta waxtar leh. Dhulidda dhulka, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero qoto dheer ee jeexjeexyada, heerkulbeegga engine, booska wheels ee motoblock.